Man City uma badna inay soo iibsato bedelka Sergio Aguero xagaagan – Pep Guardiola | Berberanews.com
Home CAYAARO Man City uma badna inay soo iibsato bedelka Sergio Aguero xagaagan –...
Ciyaaro(Berberanews)-Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in kooxdu aanay u badneyn inay soo iibsato weeraryahan xagaagan si uu u bedelo Sergio Aguero oo kooxda ka tagaya.
City ayaa xaqiijisay Isniinta in Aguero, oo 32 jir ah, uu bixi doono marka qandaraaskiisu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Xayeysiinta Guardiola ayaa eegay xulashooyinka, iyadoo weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, oo 20 jir ah, uu ugu sarreeyo liiska bartilmaameedyada.
Si kastaba ha noqotee, Guardiola wuxuu dareemayaa khidmadaha hadda la soo xigtay inay aad u badan yihiin.
“Ma garanayo waxa dhici doona laakiin siciradan ma dooneyno inaan soo iibsano weeraryahan kasta,” ayuu yidhi.
Waa wax aan macquul aheyn. Ma awoodi karno. Dhamaan kooxaha ayaa ku dhibtoonaya dhanka dhaqaalaha, anaga sidoo kale.
“Maanta waxaa jirta fursad badan oo aan u soo iibsan doonin weeraryahan xilli ciyaareedka soo socda.”
Dortmund ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso ugu yaraan 150m euros (£ 128m) oo ay ku dooneyso ciyaaryahanka reer Norway Haaland, oo wakiilkiisa Mino Raiola uu la kulmay Barcelona iyo Real Madrid oo ku aadan heshiiska.
Heshiiska Haaland ee haatan wuxuu dhacayaa 2024, in kastoo loo maleynayo inay ku jirto qandaraas lagu burburin karo 75m euros (£ 64m) oo la dhaqaajin karo sanadka soo socda.
Kabtanka England Harry Kane ayaa ah dookh kale oo macquul ah oo City ah, inkasta oo qandaraaskiisa Tottenham aanu sidoo kale dhicin ilaa 2024.
Aguero, oo ka soo wareegay Atletico Madrid 2011, waa ciyaaryahanka ugu goolasha badan City, isagoo 257 gool u dhaliyay 384 kulan oo uu u saftay kooxda. Wuxuu caan ku ahaa inuu ku guuleysto waqtigii dhaawaca ee kulankii QPR ee 2012 kaasoo ku guuleystey horyaalkii ugu horreeyey ee Ingiriis ah muddo 44 sano ah, tan iyo markaas wuxuu ka caawiyey City inay ku guuleysato seddex horyaal oo Premier League ah, hal FA Cup iyo shan League Cups.
Guardiola ayaa sheegay in ay tahay wax aan macquul aheyn in City ay ku badasho tababaraha reer Argentine qof u malaynaya guulaha uu gaadhay. “Waan ognahay sida uu muhiim u yahay waqtigan iyo wixii la soo dhaafay, go’aannadaasi marna ma fududaan,” ayuu yidh.
“Laga yaabee inaan raadineyno ciyaaryahan cusub oo badalkiisa ah laakiin dhanka tirada? Suurtagal maaha. “Marka loo eego waxa uu ula jeedo? Suura gal maaha.”
Previous articleMadaxweyne Biden oo muddo kordhin u sameeyay cunaqabatayntii Somalia
Next articleIMF grants Somalia $970,000 interim assistance